Imibutho emele uluntu yase Khayelitsha ukuvuyele ukwalelwa ngebheyile kwabo batyholwa ngokudlwengula noku bulala – Elitsha
26th July 2016 Unathi TutaEdition 7 0 English Xhosa
Umfanekiso ka Sinoxolo Mafevuka uxhonywe emnyango we nkundla.
Umbutho wamantombazana ase Town Two, uthi uyasamkela isigqibo senkundla kamantyi yase Khayelitsha sokwalela ukuba bafumane ibheyile abarhanelwa ababini kwityala lokudlwengulwa kubulawe u Sinoxolo. Ubungqina obusenkundleni budiza ukuba lentwazana yayineminyaka elishumi elinesithoba ubudala yadlwengulwa ebuntombini nakwilungu langasemva.
Elinye ilungu lalombutho ozibiza Town Two Rock Galz u Asanda Jula uthi bazokutsho bonwabe ngoku kuba beyalelwe ibheyile. “Siyavuya bengayifumananga ibheyile kuba thina besingazokwanaba ekuhlaleni emveni kokuba satyikitya uxwebhu oluza kule nkundla lumemelela ukuba bangayifumani ibheyile. Ukuba bebeyifumene bebezakusinqoloba ngabanye ngabanye”, ulebele ngelitshoyo loka Jula.
Inkundla kamantyi yase Khayelitsha igwebe ukuba bangayifumani ibheyile abatyholwa. Ukanti izityholo zokuba umama wabarhanelwa uphazamisana nengalo yomthetho zibenefuthe elimandla kwisigqibo sika mantyi obechophele ityala umnumzana Xolani Patrick Menyiwe. Oka Menyiwe uthe ezinye izityholo ezenziwe ngamanye amangqina kumphandi wetyala nezithi ayangcungcuthekiswa ekwagrogriswa ngumama wabarhanelwa u Zandiswa Mafilika.
La nkundla ikwave ukuba kukho elinye ingqina eloyike kangangokuba aliyenzanga ingxelo efungelweyo emapoliseni.
Abo bebeqhanqalazela ukuba bangayifumani ibheyile abarhanelwa phambi kwenkundla ka mantyi eKhayelitsha. Photo: Zonke ifoto zithathwe ngu Mzi Velapi
Amaxwebhu atyikitywe ngamalungu ombutho Town Two Rock Girls, Progressive Youth Movement ne Social Justice Coalition nawo aye anefuthe kwisigqibo sika Menyiwe sokwalela abarhanelwa ibheyile.
Ukanti lo mantyi uye wachaphazela ukuba akanako ukuluqinisekisa ukhuseleko labarhanelwa ukuba ngaba bakhululwe ngebheyile nanjengoko abahlali bako SST benze kwacaca ukuba ababafuni kulangingqi kangangokuba bayalela umama wabo ukuba awachithe amagumbi ebebelala kuwo.
Ophuma kumbutho iSocial Justice Coalition u Nomthetho Kilo uthe “Sakukhe silale obuhlayo kuba kuyabonakala ukuba umantyi uluthathele ingqalelo uluntu. Siziva sikhululekile ngoku kwaye sizakujonga okulandelayo.”
Utshutshiso lweli tyala kulindeleke ukuba liyakuqhutywa kwinkundla ephakamileyo yeli phondo le Ntshona Koloni.
Oko akusenakuba kudala ukuba luqale nanjengoko icandelo lezotshutshiso lidize ukuba yingxelo efungelweyo enye kuphela ekufuneka ifunyenwe ngabacuphi kwingqina elinye kwaye umphandi wetyala umnumzana Isaac Tshabalala uthe uzakuyifumana kungekudala lo ngxelo.
Also read: Ulutsha lwase Khayelitsha luye lwahlohla umphathiswa negqiza lakhe ngemibuzo
Ityala lizakubuyela kwinkundla kamantyi e Khayelitsha ngomhla weshumi elinanye kwinyanga yeThupha (August) nalapho kulindeleke ukuba kumiselwe usuku lokusa elityala kwinkundla e phakamileyo.
Aba bafana ababini babanjwa ebutsheni benyanga yo Kwindla emva kokufunyanwa komzimba ka Sinoxolo oze awowophulwe amalungu kwigumbi langasese lika wonke wonke kwingingqi I Blowie ko SST eTown Two.